Cawayska Washington, 31 August 2019
Sabti 31 August 2019
Ku soo dhawaada Barnaamijka Caweyska Washington oo qodobbo xiiso leh ay ku jiraan. Sahra Ciidle Nuur, ayaa soo jeedineysa.
Dhageyso barnaamijka Caweyska Washington. Waxaa soo diyaarisay soona jeedineysa Sahra Ciidle Nuur.
Dhageyso banraamijka Caweyska Wasington ee toddobaadkan oo ay soo diyaariysay Sahra Ciidle Nuur.
Ku soo dhowaada barnaamijka Caweyska Washington. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.